विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ८ परीक्षण अनिवार्य गर्नुहोस ! – Gandak News
कास्कीका ३६५ सहित गण्डकीमा थप ७०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
मुम्बईमा लडाकु पानीजहाज विष्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु
विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ८ परीक्षण अनिवार्य गर्नुहोस !
गण्डक न्यूज द्वारा १२ पुष २०७८, सोमबार १९:१८ मा प्रकाशित 0
सोसल मिडियामा स्क्रोल गरेर हेर्दा साथीभाइ वा आफन्तको विवाहको तस्बिर देख्नुहुन्छ होला । यस्तै कतिले इन्गेजमेन्ट त केहीले हनिमुनका फोटो पनि सेयर गरिरहेका होलान् । यो देखेर तपाईंलाई पनि परिवारका सदस्यले विवाह गर भन्ने दबाब दिइरहेका होलान् ।
महिला होस् वा पुरुष हरेकको जीवनमा विवाहले केही परिवर्तन ल्याइदिएकै हुन्छ । यो कुरालाई तपाईंले पनि महसुस गर्नुभएको होला । जो साथीलाई तपाईंले दिनदिनै भेट्नु हुन्थ्यो, उनीहरु आज कम भेट्न भेट्न थालेका छन् । उनीहरुको पारिवारिक जिम्मेवारी बढेका कारण यस्तो भएको हो ।
लाइफ कोच तथा लेखिका सारा इ स्टिवर्ट भन्छिन्, ‘विवाहले सबैकुरा फेरिदिन्छ ।’
यदि तपाईं पनि विवाह गर्ने योजना बुनिरहनुभएको छ भने यहाँ दिइएका ८ कामबारे पढ्नुहोस् र तपाईंले ती काम गर्नुभयो कि भएन भनेर मनन गर्नुहोस् । विवाह अघि यी काम गर्न विज्ञको सल्लाह छ ।
आर्थिक रुपमा सबलः
चाहे तपाईं जागिर खाइरहनुभएको छ वा कुनै अन्य काममार्फत् तपाईंको आम्दानी भइरहेको छ, जोसुकै पनि आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । यो कुरा विवाह अघि नै थाहा पाउनुपर्छ ।
पार्टनरसँग झगडा गरेर हेर्नुहोस्ः
विज्ञका अनुसार तपाईंका प्रेमी वा भावी श्रीमानले झगडा परेका बेला तपाईंलाई कसरी सम्हाल्छन् भन्ने कुरा तपाईंले विवाह अघि थाहा पाउनुपर्छ किनभने यो सफल विवाहको कुंजी हो ।
सपोर्ट सिस्टम बनाउनुहोस्ः
विवाह गरेपछि तपाईंको फ्रेन्ड सर्कल फेरिन्छ । विवाह अघि तपाईंको केटा–केटी साथी पनि हुन्छन् तर विवाहपछि तपाईंको उनीहरुसँग कुराकानी कम हुन थाल्छ । त्यसैले विवाह अघि नै यस्ता फ्रेन्ड सर्कल तयार गर्नुहोस्, जोसँग विवाहपछि पनि परिवारजस्तै घुम्न सक्नुहोस् । यस्तो बलियो सपोर्ट सिस्टम वा साथी सर्कल निकै आवश्यक हुन्छ ।
ग्रुमिङमा ध्यान दिनुहोस्ः
धेरैजसो मानिस आफ्नो ग्रुमिङमा धेरै ध्यान दिँदैनन् । यद्यपि, सबैलाई राम्रोसँग ग्रुम गरिएका मानिस नै मनपर्छ । त्यसैले समय निकालेर आफ्नो ग्रुमिङमा ध्यान दिनुहोस् । यस्तो गर्दा तपाईंको कन्फिडेन्स आउनेछ जुन लामो समयसम्म यथावत् रहनेछ ।
सम्बन्धमा रहँदा र कसैलाई डेट गरेपछि हाम्रा लागि को सही छ, को गलत छ भन्ने थाहा हुन्छ । सेक्सोलोजिस्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट तथा राइटर डन माइकल भन्छन्, ‘विवाह गरेपछि जो पनि खुसी हुन्छ र उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ । मेरो मान्यता यो छ कि सम्बन्ध एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट हामी सबै गुज्रिनुपर्छ ।’
एक्लै वा रुममेटसँग बस्नुहोस्ः
एक्लै वा रुममेटसँग बस्दा तपाईंले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ । यस्तो गर्दा तपाईं आर्थिक र भावनात्मक रुपमा आफूले आफैंलाई तयार गर्नुहुन्छ र परिस्थितिसँग लड्न सिक्नुहुन्छ । एक्लै वा रुममेटसँग बस्दा तपाईंले घरको जस्तै सुविधा पाउनुहुन्नँ । जस्तै, आमाको हातको खाना, धोइएका कपडा, सफा घर आदि । जब तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ तब सबै काम तपाईं आफैंले गर्नुपर्छ ।
यदि तपाईंले संसारको सुन्दरता देख्ने र अनुभव गर्ने मौका पाउनुभएको छैन भने विवाह अघि घुम्नु सही समय हो । नभए विवाह पछि त जिम्मेवारीका कारण योजना मात्रै बन्ने गर्छ । यद्यपि, तपाईंको पार्टनरलाई पनि घुम्ने शौख छ भने विवाह पछि पनि सँगै घुम्न सक्नुहुन्छ ।
शौख विकसित गर्नुहोस्ः
हरेक व्यक्तिको कुनै न कुनै शौख हुन्छ । तर केही मानिसहरु यस्ता हुन्छन् जसलाई आफ्नो शौखबारे थाहै हुँदैन । तर ती व्यक्तिले थाहा पाउनुपर्छ कि शौखले मानिसलाई जीवन जिउने कला सिकाउँछ । विवाह अघि आफ्नो शौखको सूची तयार पार्नुहोस्, जस्तैः घुम्नु, पढ्नु, लेख्नु, योग, गीत गाउनु, नाच्नु आदि ।